Weerar Khasaara Dhaliyay oo Ka Dhacay Saldhig Ciidanka India Ku Leeyihiin Gobolka Kashmiir.
Wednesday October 04, 2017 - 08:18:57 in Wararka by Super Admin
Khasaara xooggan ayaa ciidamada dowladda Hindiya kasoo gaaray weerar iqtixaam ah oo xoogag islaamiyiin ah ay ku qaadeen saldhig melleteri oo kuyaal gobolka Kashmiir ee gumeysiga kujira.
Wararka ka imaanaya Kashmiir qeybta Hindiya gumeysato ayaa sheegaya in saaka aroortii hore weerar xooggan uu qabsaday saldhig melleteri oo cadawgu ku lahaa duleedka magaalada Siningaar oo ah magaalada ugu weyn ee muslimiinta kashmiir ka deganyihiin qeybta Hindiya ixtilaalka ku heysato.
Goob joogayaal ayaa sheegay in xoogaga weerarka qaaday ay qaraxyo la beegsadeen saldhigga melleteriga Hindiya kadibna waxaa bilaawday iqtixaam waxaana jira khasaara dhimasho iyo dhaawac ah oo cadawga gaaray.
Afhayeen u hadlay dowladda hindiya ayaa qiray in weerarka oo dhacay aroornimadii hore ee saaka uu ahaa mid saacado badan socday balse wuxuu yareeyay khasaaraha ciidamadooda soo gaaray oo uu kusoo koobay 2 dhimasho ah.
Wakaaladaha wararka ayaa faafiyay in ciidamo farabadan melleteriga Hindiya laga dilay waxaana la arkayay qiic iyo uura madoow oo cirka isku shareeray saldhigga weerarka lagu qaaday oo kaabiga ku haayo magaalada Sininigaar.
Muslimiinta Kashmiir ayaa dagaal adag kula jira dowladda Hindiya waxayna u dagaallamayaan sidii dhulalkoodu uga xuroobi lahaayeen xummaanta Hindiya, sanaddii 1974 ayay Hindiya iyo Pakistan kala qeybiyeen gobolka Kashmiir wuxuuna gobolkaas marti geliyay dagaallo culus oo dhaxmaray labada dowladood.
in kabadan 500 oo kun askar Hindi ah ayaa larumeysanyahay in ay ku suganyihiin magaalada Sininigaar iyo hareeraheeda, jamaacaadka islaamiga ah ee Kamshmiir ka dagaallama ayaa dhowaan soo saaray bayaanaat ay ugu hanjabayaan xukuumadda Hindiya kadib markii dowladda Kirishtanka Mareykanka ay jamaacaadkaas ku dartay liiska waxa loogu yeero Argagaxisada.
Ciidamo Huwan Ah Oo Lagu Weeraray Duleedka Deegaanka Jaziira.